ကြည်ဇော်အေး ● မျက်မြင်သက်သေ | MoeMaKa Burmese News
editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ မိုးမခ ရုံးစားပွဲ - Home ရုံးခန်းအသစ်၊ အမှတ် (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလ လမ်းမ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ဖုန်း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မန္တလေး)။ ။ စာတိုက်သေတ္တာ (၈၂၅)၊ ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီး။
» Kyi Zaw Aye
» ကြည်ဇော်အေး ● မျက်မြင်သက်သေ
ကြည်ဇော်အေး ● မျက်မြင်သက်သေ(မိုးမခ) မတ် ၁၉၊ ၂၀၁၇သွားမလုပ်နဲ့ကြည့်မြင်တိုင်များ သွားမလုပ်နဲ့ ကိုစောညိန်းတောင် ရိုက်သတ်တာသွားမလုပ်နဲ့ကန့်ဘလူများ သွားမလုပ်နဲ့ သိပ္ပံမောင်ဝတောင် သတ်ပစ်တာသွားမလုပ်နဲ့သွားမလုပ်နဲ့ဖားကန့်များ သွားမလုပ်နဲ့ ပိုင်သလည်း အသတ်ခံရတာသွားမလုပ်နဲ့သွားမလုပ်နဲ့သွားမလုပ်ကြနဲ့အဲဒီတိုင်းပြည်များ လူသွားမလုပ်မိကြလေနဲ့ဖော်ဝေးတွေ မောင်ချောနွယ်တွေ မြို့မငြိမ်းတွေ ဒေါ်မန္တလာမြင့်တွေ လူချမ်းသာကြီးတွေလူကြားထဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှ အကုန်ချွတ်ပေးထားခဲ့ရတာ ။ကြည်ဇော်အေး၁၆ မတ်လ ၂ဝ၁၇
Categories: Kyi Zaw Aye,
Maung Sein Ni - Rest in Peace
U Ko Ni - Rest in Peace
MoeMaKa Monthly MARCM 2017 ထွက်ပြီ
ဒေါက်ဒေါက် ... “မိုးမခ လားဟေ့၊ ၀င်ခဲ့လေကွယ်”
ချ မ်းမြ - အ န်​ တီအေး(၀တ္ထုတို) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅ (၁) "ဒန်​အိုး​ပေါက်​​​ ဒယ်​အိုး​ပေါက်​ ​ရေသန့်​ဘူးခွံ ဘီ...
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း ● တပေါက်ကလည်း တပေါက်ဆိုသလောက် (မိုးမခ) မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၇ ထူးထူး (တောင်ငူ) - အို ဆရာမရယ်
တူမောင်ညို ● “သံတမန်တွေ မျက်နှာအငယ်ရဆုံးကာလ” တဲ့ တူမောင်ညို ● “သံတမန်တွေ မျက်နှာအငယ်ရဆုံးကာလ” တဲ့ (မိုးမခ) မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၇ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (MOFA) သက်တမ်း အနှစ် ၇၀ ခရီးဆိုတဲ့ သတ...
ကာတွန်း ကိုခေတ် ● လူငယ်သဘာဝနဲ့ မတော်တဆ (မိုးမခ) မတ် ၂၃၊ ၂၀၁၇ ဗိုလ်ထက်မင်း - အမျိုးသားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်ခံရပြီဆိုရင် - ၄
ဗိုလ်ထက်မင်း - အမျိုးသားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်ခံရပြီဆိုရင် ဘယ်လိုစီမံချက်ရှိရင် ကောင်းမလဲ - (၄) (မိုးမခ) မတ် ၂၅၊ ၂၀၁၇ မဟာဗျူဟာ အစီအစ...
ကာတွန်း ညီထွေး ● မြန်မာ အိုင်ထော
ကာတွန်း ညီထွေး ● မြန်မာအိုင်ထော (မိုးမခ) မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၇ ကာတွန်း ATH ● ဖျာပါတီဟေ့ ... ဖျာပါတီ ...
ကာတွန်း ATH ● ဖျာပါတီဟေ့ ... ဖျာပါတီ ... (မိုးမခ) မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၇ ကာတွန်း ဆွေသား - ငြိမ်းချမ်းရေး တပွဲစားမယ် ကာတွန်း ဆွေသား - ငြိမ်းချမ်းရေး တပွဲစားမယ် (မိုးမခ) မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၇ MoeMaKa News (editors @ moemaka.net ) – PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA . Powered by Blogger.
လှကျော်ဇော ● ဆရာဦးကိုနီကို ဘယ်သူသတ်သလဲ .... (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇ ကျွန်မ ဦးကိုနီကို လူပုဂ္ဂိုလ်အရ မသိပါ။ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံက ကိုခ...
ဖြန့်ချိရေး တာဝန်ခံမိုးမခကို အားပေးကြပါစို့ …	PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ HOME, ၅၈/၆၀ ဗိုလ်အောင်ကျော်အောက်လမ်း၊ ရန်ကုန်၊ စာတိုက်သေတ္တာ (၈၂၅)၊ ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီး။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) အခြားရနိုင်သော စာအုပ်ဆိုင်များ ၀။ မြသရဖူစတိုး၊ (၃ရ၉) အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး ၁။ စာပေလောက (၂၊၅၊၆)(ပန်းဆိုးတန်း၊လှည်းတန်း၊ရန်ကင်း) ၂။အမေ့အိမ်(ပန်းဆိုးတန်း) ၃၊အာရုဏ်သစ်စာပေ(ဗိုလ်ချုပ်လမ်း) ၄။ အင်းဝစာအုပ်တိုက် (လှည်းတန်း၊ပန်းဆိုးတန်း) ၅။ဝါမိုးအောင်စာပေ(ကုန်သည်လမ်း) ၆။သာလွန်စာအုပ်တိုက်(ကုန်သည်လမ်း) ၇။တူဒေးစာအုပ်တိုက်(ကုန်သည်လမ်း) ၈။ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်(ပန်းဆိုးတန်း) ၉။ရန်အောင်စာပေ(ရန်ကင်းလမ်းမကြီး၊၁၂လုံးတန်း) ၁၀။ဖိုးတုတ်စာပေ (၃၁ လမ်း) ၁၁။ မီဒီယာကော်နာ (အနော်ရထာလမ်း မီးပွိုင့်ထောင့်) ၁၂။နန်းဦးစာပေ (မဟာဗန္ဓုလလမ်း) ၁၃။ ကိုလတ် စာပေ---၃၁လမ်း ၁၄။ ပစ်တိုင်းထောင်စာပေ-- ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၁၅။ ပါရမီ စာပေ-- ၂၉ လမ်း ၁၆။ စာပေဟင်းလေးအိုးကြီး-- လမ်း၃၀ ၁၇။ ကျော်သိန်းစာပေ--၃၂ လမ်း ၁၈။ စောဦးစာပေ-- ၃၁ လမ်း ၁၉ ။ ရာပြည့် စာပေ-- ပန်းဆိုးတန်း အထက်လမ်း ၂၀။ စာပေလောက (၅)--ပန်းဆိုးတန်း အလယ်လမ်းတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ မန္တလေး - နဂါးစာပေ၊ ထွန်းဦးစာပေ၊ ရာပြည့်စာပေ အောင်ပန်း - လမင်းတရာ Copyright © 2012 MoeMaKa Burmese News. All rights reserved.